ko htike's prosaic collection: ခိုးကူးခွေထုတ်လုပ်သည့်၊ စီးပွားရေး သောင်းကျန်းသူများပင်၊ စိတ်မဝင်စားသော၊ အဆိုတော်များ
ခိုးကူးခွေထုတ်လုပ်သည့်၊ စီးပွားရေး သောင်းကျန်းသူများပင်၊ စိတ်မဝင်စားသော၊ အဆိုတော်များ
ရန်ကုန်မြို့အထင်ကရနေရာတွေမှာ၊ဈေးကြီးပေးပြီး၊ ကြော်ငြာထားတဲ့၊ တေးသီချင်းကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်ကြီး၊ တချို့ကြောင့်၊ ရန်ကုန်မြို့တော်သူ၊မြို့တော်သားတွေ၊စိတ်အနှောက်အရှက်၊ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ မေးမြန်းစုံစမ်း ကြည့်လိုက်တော့၊ ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့အဖြေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလိုက်ရပါတယ်။
တယောက်သောသူက၊ “နေရဲမာန်” ဆိုတဲ့၊ အဆိုတော်တဦးပါ။ အသက်အရွယ်ကတော့၊ (၅၀)ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပါ ပြီ။ နာမည်အရင်းက၊ “ဌေးဝင်း” လို့၊ သိရပါတယ်။ ၁၉၈၁ ခုနှစ်က၊ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်မှ၊ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့၊ ရရှိခဲ့ပြီး၊ ဗိုလ်သင်တန်းအပါတ်စဉ်(၆၄)သို့တက်ရောက်ခါ၊ စစ်အင်ဂျင်နီယာအရာရှိအဖြစ်၊ တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့ကြောင်း၊ သိရပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးရာထူးအထိတာဝန်ယူထားစဉ်ကာလအတွင်း၊ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းများမှ၊ ငွေကြေးအမြောက်အများအား၊ အထက်အရာရှိကြီးအချို့နှင့်ပူးပေါင်း၍၊ စနစ်တကျခိုးယူထားမှုများပြုလုပ်ခဲ့ တယ်လို့၊ ဗိုလ်မှူးဌေးဝင်းရဲ့၊အပေါင်းအသင်းများထံမှ၊ ကြားသိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင်မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင် လီမိတက်၊ သို့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလမှာလည်း၊ အလားတူအကြံအဖန်လုပ်ခိုးဝှက်ထားတဲ့၊ ငွေကြေးအမြောက်အများစုဆောင်းထားခဲ့တယ်လို့လည်း၊ သိရှိရပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုခိုးဝှက်ထားတဲ့၊ နိုင်ငံတော်ပိုင်၊ပြည်သူ့အခွန်ငွေတွေနဲ့၊ တေးထုတ်လုပ်ရေးလောကထဲဝင်ရောက်၊ လှုပ် ရှားလာတာပါ။ ကိုယ်တိုင်သီချင်းဆို၊ ကိုယ်တိုင်သရုပ်ဆောင်လုပ်လာပါတယ်။ နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် များ၊ မော်ဒယ်များကို၊ ငွေကြေးအမြောက်အများပေးပြီး၊ သူ့သီချင်းခွေထဲမှာ၊ သူနဲ့အတူတွဲဖက်သရုပ်ဆောင် စေပါတယ်။
နောက်တယောက်က၊“ ဖိုးသား” ဆိုတဲ့၊ အဆိုတော်၊ဝတုတ်လေးပါ။ ဖခင်ဖြစ်သူကတော့၊ ဗိုလ်မှူးကြီး၊သက်စိုး ပါ။ လက်ရှိစစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်က၊တပ်မှူးတဦးပါ။ ထုံးဆံအတိုင်း၊ အပျောက်ရိုက်ခိုးထားတဲ၊့ ငွေတွေနဲ့၊ ချစ်သားလေးကို၊ အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်တွန်းတင်ပေးနေတာပါ။
သူတို့နှစ်ဦးရဲ့အခွေတွေကို၊ အများပြည်သူတွေက၊ ဝယ်ယူအားပေးမှုမရှိသလောက်ပါ။ ယုတ်စွအဆုံး၊ ခိုးကူးခွေ နဲ့စီးပွားရှာနေတဲ့ဝိသမလောဘသမား၊ တွေတောင်သူတို့အခွေတွေကို၊ ခိုးမထုတ်ကြပါဘူး။ သေချာပေါက်အရှုံး ပေါ်မှာသိနေကြလို့ပါ။ ရန်ကုန်လူထုကတော့၊ စစ်တပ်ကျောထောက်နှောက်ခံနဲ့လာတဲ့၊ ခိုးထားတဲ့ငွေကြေးတွေ ကြောင့်၊ သူတို့အခွေတွေကို၊ အားမပေးကြတာလို့သိရပါတယ်။
အလားတူ၊ ခိုးကူးသမားတွေလက်ရှောင်တဲ့၊ စစ်တပ်ကျောထောက်နောက်ခံ အဆိုတော်တဦးလည်းရှိပါသေး တယ်။ သူနာမည်ကတော့၊ “ဖြူ” ပါ။ လုပ်ကြံခံရလို့သေဆုံးသွားတဲ့၊ နဝတ အတွင်းရေးမှူး(၂)၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ကြီးတင်ဦးရဲ့သမီးပါ။
တကယ်တော့၊လက်ရှိအနေအထားမှာ၊ ခိုးကူးခွေသမားတွေကြောင့်၊ အရှုံးပေါ်နေကြလို့၊ ဘယ်နာမည်ကြီး၊အနု ပညာရှင်တွေမှ၊ အခွေမထုတ်ရဲ့တဲ့အချိန်ပါ။ စစ်အစိုးရရဲ့အကျင့်ပျက်အမှုထမ်းတွေနဲ့၊ ပါတ်သက်တဲ့သူတွေဘဲ၊ တတ်နိုင်တာပါ။ ခိုးကူးခွေထုတ်လုပ်တဲ့၊ စီးပွားရေးသောင်းကျန်းသူတွေကို၊ စစ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေက၊ ထိ ရောက်စွာအရေးယူပေးခြင်းမရှိပါဘူး။ ဆင်ဆာဘုတ်အဖွဲ့က၊ အရာရှိကြီးတချို့နဲ့ ခိုးကူးခွေထုတ်လုပ်တဲ့သူများ၊ အကျိုးတူပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေကြတာလို့၊ သိရှိရပါတယ်။
ဒီဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာလိုက်တော့၊ စစ်တပ်အရာရှိငယ်အဆင့်လောက်နဲ့၊ ငွေကြေးအမြောက်အများခိုးယူနိုင်စွမ်းရှိ ရင်၊ထိပ်ဆုံးက၊ တပ်ချုပ်ဆိုတဲ့၊ စစ်အာဏာရှင်ကြီး၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ နဲ့ ခိုးသားတပ်ဖွဲ့ဆိုရင်………….။
“ ကဲ ဘယ် လို လဲ ရဲ ဘော် ” ။
AMAZING SINGERS, THEIR SONGS WERE NOT EVEN COPIED BY PIRATE PRODUCER.
The most crowded places in Rangoon, where the advertising boards were expensive to host but people of Rangoon were frustrated to look at them as those two shameless barefaced singers put on their advertising boards on every available places and people are laughing at them because of their songs were refused by illegal pirate copy distributors.
One of them is 51 years old, Nay Ye Mann alias Htay Win. He was graduated from Rangoon Institute of Technology in 1981 with B.E (Civil) Degree. He was enlisted into Military services via Officer Training School (OTS) No.64 intake and served in the Army Garrison Engineering Corps up to the post of Major. During his time served in the army, he digs his fortune by making big amount of money from executing many Government and Army projects. He was then transferred to UMEHL (Business branch of Army) and making money there too. With full load of money looted from State own properties, he started to produce his laughing stocks of songs to irritate the general public. He spent the millions and millions of money for his products and performing with all famous actress, singers and models, most of them are young enough to be his own youngest daughter.
People are laughing at him because of his useless artistic ability which can compare to none and roadside bagger can sing even very much better than him. His products were not sold because mostly were giving out as presents. People hate to support the person with Army background. Another example of not receiving people support wasasinger Phyu. She isadaughter of late Lt. Gen. Tin Oo and she spent so much money to produce her song album but end up in the same way. Pirate distributors refused to copy her products.
Another singer name is Pho Thar and he isason of Colonel Thet Soe, who also served in Garrison Engineering Corps at present. Pho Thar is in the same category of old barefaced Nay Ye Mann but he isayoung barefaced with zero artistic talent. Money was wasted by millions and millions because his father was getting rich from state own properties too.
Actually, now isadifficult time for evenafamous and reputed singer to produceanew album. Producers are also afraid because of uncontrolled pirate copying gangs at large and authorities are closing eyes and sharing the bribes. Present business recession also effected to music production but Nay Ye Mann and Pho Thar are not perturbed because they are coming from another kind of society. They are from army society, which mean most notoriously corrupted and dare to steal everything from state coffer.
This story is comparatively small and involved only by two junior level army officers. Junior gangs can made such amount of money so imagine how big amount will be stolen by higher level officers. ( ? ).
Posted by ကိုထိုက် at 10:26
27 November 2016 at 07:35